Xaaladda Shirkadda Saab oo Weli Cakiran - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Nooca ka mid ah noocyada gawaarida ee Saab 9-4X. Sawirle: Damian Dovarganes/Scanpix.
Xaaladda Shirkadda Saab oo Weli Cakiran
Shirkadda Saab iyo go'aanka shirkadda GM
La cusbooneeyay tisdag 8 november 2011 kl 13.20
La daabacay tisdag 8 november 2011 kl 10.25
Sheeka-xariirtii shirkadda gawaarida ee Saab ayaa weli halkeedii ka sii socota, kadib shaleyto oo shirkadda gawaarida ee GM horena mulki ugu lahayd shirkadda Saab ku dhawaaqday in aaney diyaar u ahayn iney sii deeyso ama gaddo leeysannada noocyada gawaarida saab ee 9-3, 9-5, iyo 9-4X, waana leeysanno ey GM weli mulki u leedahay.
Su'aasha taagan ayaa haddaba ah maxaa ka soo haray heshiiskii ey hore u wada-gaareen shirkadda Saab iyo shirkadaha gawaarida ee shiineeska Pang Da iyo Youngman?.
Rolf Åbjörnsson, ahna qareen culuun dheer u leh nidaamka dib u dhiska shirkadaha ayaaney ka fajacin go’aanka diidmada ee ka soo yeeray shirkadda GM.
- Midda ugu wanaagsan waxay ahyd in maamulka shirkadda Saab uu xiriir la sameeyo shirkadda GM intii aaney qalinka ku duugin heshiiska shirkaddu la gashay shirkadaha shiineeska. Iminka middaasi ma aanay dhicin waxaana la filayay in shirkadda GM ay adeeci doonto heshiiskaa. Isla markaana mudaddii lagu guda jiray dib u dhiska shirkadda Saab la ogsoonaa in aanay noqon doonin amuur sahlan xiriirka GM.
Agaasimaha shirkadda Saab Victor Muller in isku-dayga la isku dayayo sidii middaa looga dhaadhicin lahaa shirkadda GM uu halkeedii kas ii socon doono. Middaasina uu ula jeeday in heshiiska la saxiixo iyo in la soo wada-fariisto miiska wada xaajoodka. Waana masuuliyad saaran shirkadaha Pang Da iyo Youngman iney ka dhaadhiciyaan shirkadda GM dhabbadooda mustaqbal.
Macnaha amuurtani u yeelan karto shirkadda Saab waa mid aan la saadaalin karin. Laanta wararka ee shirkadda ayaa shalay sheegtay un in wada-haddalladii ey halkoodii ka sii socon doonaan. Sidoo kale qareen Guy Lofalk oo isagu masuuul ka ah dib u dhiska shirkadda Saab ayaa ka gaabsaday. Halka uu Rolf Åbjörnsson u arko mid adag sidii hore loogu sii socon lahaa go’aankii dib u dhiska shirkadda Saab maadaama aanay jirin xaalado aasaas u noqon kara heshiiska shirkaddu la gashay Pang Da iyo Youngman. Sidoo kale haddii u jabo go’aankii dib u dhiska shirkadda, waxay shirkaddu bannaanka ugu soo dhaceeysaa in busaarad la geliyo, middaasina oo noqon kari lahayd xalka iminka ugu wanaagsan, sida uu qabo Rolf Åbjörnsson.
- Busaarad la geliyo shirkadda maaha macnaheedu in heshiiskii uu burburay. Iyadoona hayadda busaarad-gelintu awood u leedahay iney iibiso leeysannada GM iyada oo aan wax ka weeydiin shirkadda GM. Waxayna iila muuqataa in shirkadda oo la busaarad geliyaa iminka ka wanaagsan tahay in nidaam dib u dhis ay ku sii jirto, sida uu sheegay Rolf Åbjörnsson, mar uu u warramayay laanta wararka ee Ekot.
Wadahadal Dawladda iyo GM